+7 uri ndị ụmụ nwanyị dere | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
+7 poems ndị ụmụ nwanyị dere
Encarni Arcoya | | Emelitere na 01/07/2020 08:26 | ụdịdị, Abụọ
N'ihi na n'ọtụtụ oge, ha emechiela ọnụ; n'ihi na n'ihi ihe ndị na-adịgide ọbụna taa na anyị adịghị aghọta, ha ka na-eleghara anya ma e jiri ya tụnyere nwoke na nwanyị; n’ihi na ha nwere ọtụtụ àgwà dịka nke ndị mmadụ dere; n'ihi na o bukwa akwukwo na ebea, na blog a, anyi raara onwe anyi nye ikwu banyere ezigbo akwukwo ... Maka ihe ndia nile na ndi ozo m nwere ike i nye gi, ta ka m wetara gi edemede. 5 poems ndị ụmụ nwanyị dere.
Kpee onwe gị ikpe ... Ma ọ bụ ka mma, ekpela ikpe, naanị nwee obi ụtọ ...
1 Nwanyị mbụ nke ụwa na-ede uri
1.1 Mbuli elu nke Enheduanna na Inanna
1.1.1 INNANA NA CHINEKE
1.1.2 INNANA NA AN
1.1.3 INNANA NA ENLIL
1.1.4 INNANA NA ISHKUR
1.1.5 INNANA NA ANUNNA
1.1.6 INANNA NA EBIH
2 Ebube ndi ozo nke umu nwanyi kwesiri ima
2.1 «Na na na na na» (Maya Angelou)
2.2 "Mgbanaka" (Emily Dickinson)
2.5 "The Manor Ogige" (Sylvia Plath)
2.6 "Ọnọdụ onwe euthanasia" (Gloria Fuertes)
2.7 "Kpee gbasara chioma" (Sor Juana)
2.8 "Lovehụnanya nke na-agbachi nkịtị" (Gabriela Mistral)
2.9 "Ihe na-efu efu" (Alfonsina Storni)
2.10 "Ha na-ekwu na osisi anaghị ekwu okwu" (Rosalía de Castro)
Nwanyị mbụ nke ụwa na-ede uri
N'agbanyeghị eziokwu ahụ na e meela ka ụmụ nwanyị banye n'ọnọdụ nke abụọ na nka niile, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ha pụtara iche n'ọnọdụ ụfọdụ. Na ihe a na-amaghị bụ na, onye ọbụ abụ mbụ, bụ nwanyị, ọ bụghị nwoke. Anyị na-ekwu maka ya Enheduanna, ada Eze Sargon nke Mbụ nke Acad.
Enheduanna bụ onye nchụàjà Nannar, chi ọnwa ndị Sumer. N’oge ya, ikike ọchịchị ma nke okpukpe bụ otu, ọ bụ ya mere o ji eso na gọọmentị Ua, ọ bụkwa dị ka anyị gwara gị, onye abụ mbụ nke ụwa.
Ejiri enheduanna bụrụ abụ nke ịbụ nke ọdịdị okpukpe. O dere ya ná mbadamba ụrọ na ihe ndị e dere n'ụrọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abụ niile a gwara chi chi Nannar, ụlọ nsọ, ma ọ bụ chi nwanyị Inanna, onye chebere usoro ndị eze Akkad (nke ọ nọ na ya).
N'ezie, otu n'ime uri ndị e chebere bụ ihe ndị a:
Mbuli elu nke Enheduanna na Inanna
INNANA NA CHINEKE
Nwanyị isi okwu niile, ezigbo nwanyị, ezigbo nwanyị
yi uwe mara mma
onye eluigwe na ala hụrụ gị n'anya,
enyi ụlọ nsọ An
I yiri ihe ịchọ mma dị ukwuu,
ichoro tiara onye isi nchu aja
ndị aka ha jidere isi okwu asaa ahụ,
ọ bu ha ka i rọputaworo, tukwasi kwa ha n'aka-gi.
Chịkọtara ihe dị nsọ ma tinye ha
INNANA NA AN
Dị ka dragọn, i jiriwo nsi kpuchie ala
Dika ébunderè-elu-igwe dika olu mb youe I narbili n'elu uwa
osisi na osisi daa n'okporo ụzọ gị.
Are bụ idei mmiri na-agbadata
Chi Ọnwa nke Eluigwe na Earthwa!
ọkụ gị na-efegharị gburugburu ya na-ada
Nwanyị nọ n'elu anụ ọhịa,
Ọ ka na-enye gị àgwà, iwu dị nsọ
na ị na-ekpebi
ị nọ n’emume nnukwu anyị niile
Cannye pụrụ ịghọta gị?
INNANA NA ENLIL
Oké ifufe na-enye gị nku
onye mbibi ala anyi.
N'ịbụ onye Enlil hụrụ n'anya, ị na-efefe mba anyị
ị na-efe iwu niile nke An.
Nwanyi m, nuru uda gi
ugwu na mbara ala nāsọpuru.
Mgbe anyị guzo n’iru gị
ụjọ, na-ama jijiji na ìhè gị
anyị na-enweta ikpe ziri ezi
anyị na-abụ abụ, anyị na-eru uju ha na
anyị bere ákwá n’ihu gị
na anyị na-eje ije chee gị ụzọ
si n'ụlọ oké iku ume
INNANA NA ISHKUR
Na-ewere ihe niile n'ọgbọ agha.
Nwanyị m na nku gị
ị na-eburu ala a kụrụ na mbuso agha
na oké ebili mmiri,
Na-ebigbọ dị ka oké ifufe mmiri
ị gbaa egbe, ị ga-aga egbe na ịfụfụ
ya na ikuku ojoo.
Feetkwụ gị jupụtara aghari.
Na ụbọ akwara gị
Anụla m abụ ákwá gị
INNANA NA ANUNNA
Oh my lady, ndị Anunna, ndị ukwu
Na-agbanye dị ka ụsụ n'ihu gị,
a na-efega ha n’elu ugwu.
Ha enweghị obi ike iji jee ije
n’iru gi di egwu.
Nye pụrụ ime ka iwe gị dajụọ?
Obi gị obi ọjọọ karịrị
Nwanyị, ị silk alaeze nke anụ ọhịa,
ị na-eme anyị obi ụtọ.
Iwe gị karịrị akarị ịma jijiji
Ada ada Suen!
Hasnye gọnahụrụ gị
Madam, onye kachasi elu n'elu uwa?
INANNA NA EBIH
N’ugwu ebe ị na-anọghị
a ghachara ahihia ahihia.
Have tụgharịa ha
Gi bu osimiri juputara n'ọbara
ndị mmadụ enweghịkwa ihe ha ga-a drinkụ.
Ndị agha ugwu ahụ na-abịakwute gị
Youngmụ okorobịa ahụike gbasiri ike
Obodo na-agba egwu juputara na ya
na-akwọ ụmụ okorobịa
n'ebe ị nọ, ndị a dọtara n'agha.
Ebube ndi ozo nke umu nwanyi kwesiri ima
Womenmụ nwanyị abụwo akụkụ nke ụwa, ya mere, ha abụrụla ndị okike. Ha mepụtara ihe, ha emeela otutu nka (akwukwo, egwu, eserese, ihe osise ...).
Na-elekwasị anya na akwụkwọ, nwanyị ahapụla akara na nzọ ụkwụ ya. Na abu, enwere otutu aha ndi nwanyi ndi putara dika: Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, Gabriela Mistral ...
Ma nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụghị naanị ha. Ya mere, ebe anyị na-ahapụ gị ndị ọzọ poems nke ụmụ nwanyị dere ka ị chọpụta.
«Na na na na na» (Maya Angelou)
Nwere ike ịkọwa m n'akụkọ ihe mere eme
jiri okwu gbagọrọ agbagọ,
Can nwere ike ịdọrọ m n'ime mkpofu n'onwe ya
N'agbanyeghị, dị ka ájá, m na-eteta.
Okwu nzuzu m ọ na-eju gị anya?
Maka na m na-aga ije dị ka m nwere olulu mmanụ
Na-agbapụta mgbapụta n'ime ụlọ m.
Dị ka ọnwa na anyanwụ,
Na nke eziokwu nke tides,
Dika olile anya nke elu
N'agbanyeghị ihe niile, m na-ebili.
You chọrọ ịhụ ka m bibiri?
Gbue isi gị n’ala, gbaa gị nkịtị?
Ubu ahu we dakwasị dika anya-miri.
Ike ọgwụgwụ site n’iti mkpu mkpụrụ obi m.
Mpako m ọ̀ na-akpasu gị iwe?
"Mgbanaka" (Emily Dickinson)
Enwere m mgbanaka na mkpịsị aka m.
Ikuku n’etiti osisi n’adighi nma.
Bọchị ahụ na-acha anụnụ anụnụ ma na-ekpo ọkụ ma maa mma.
M wee hie n’elu ahịhịa dị mma.
Mgbe m tetara, m tụrụ ụjọ
aka m di ocha n’etiti ehihie.
Mgbanaka dị n'etiti mkpịsị aka m apụla.
Ego ole ka m nwere ugbu a n'ụwa a
Ọ bụ a na-acha ọla edo edo.
Were aka m. Ka anyị gaa mmiri ozuzo
akpụkpọ ụkwụ na skantily, na-enweghị nche anwụ,
na ntutu isi na ikuku na aru ya na mmetuta
oblique, ume ọhụrụ na petite, nke mmiri.
Ka ndị agbata obi chịa ọchị! Ebe anyị bụ ụmụaka
anyị abụọ hụrụ onwe anyị n'anya ma mmiri ozuzo na-amasị anyị,
anyị ga-enwe ọ withụ na mfe ọ withụ
nke ụlọ nza nke na-ejide onwe ya n'okporo ụzọ.
N'akụkụ ya bụ ala ubi na okporo ụzọ acacia
na nke zuru ezu nke-ise nke onye-nwem ahu ewedara n'ala
nde na obese, onye ji ọla edo ya niile,
Enweghị m ike ịzụtara anyị ounce nke akụ ahụ
nke a na-apụghị ịkọwa akọwa na nke kachasị elu nke Chineke nyeworo anyị:
na-eme mgbanwe, na-eto eto, jupụta n'ịhụnanya.
Achọrọ m ka-na-setịpụrụ na njem
n'ime ụgbọ elu dị oke ọnụ
iburu ozu ka tan
ka Marbella ma puta n'abali
ná nnọkọ oriri na ọ thatụ thatụ ndị a na-ewepụta magazin
n’etiti ndị a ma ama, ndị nwoke na-egwuri egwu, ụmụ agbọghọ mara mma na ndị omenkà;
luru onye nti obuna obula jọrọ njọ
nyekwa m ihe osise ka m gaa n’ebe ndebe ihe mgbe ochie.
Ewerela m ike ịhapụ
na mkpuchi Vogue maka iyi
na-egbu maramara ọla olu na dayamọnd
n'olu mara ezigbo mma.
Ndị ọzọ ka njọ emeela ya
dabere na ịbanye ezigbo di:
ndị bara ọgaranya na ndị agadi kwetara
ma oburu na inwere ike igbochi ha
kee gi Kurd onye huru n'anya
si otú na-arịgo a scandalous omume.
Mama, mama, ma edobe m achọrọ m
site taa gawa, aga m atụ aro ya!
"The Manor Ogige" (Sylvia Plath)
Mmiri mmiri na-adịghị, Roses kwụsịrị.
Nsure-ọku nke ọnwụ. Yourbọchị gị na-abịa.
Ube nwere abụba dị ka obere Buddha.
Igwe na-acha anụnụ anụnụ, wepụ si n'ọdọ mmiri ahụ.
You na-agafe oge azụ azụ,
mpako nke narị afọ nke ezi:
mkpịsị aka, ọkpọiso, ụkwụ
bilie site na ndò. Akụkọ na-azụ
ndị meriri grooves,
ndị acanthus okpueze,
ugoloọma na-amasịkwa uwe ya.
Shaggy heather ị ketara, bee elytra,
ndị na-egbu onwe ha abụọ, ndị na-echegharị echegharị,
nwa oge. Kpakpando siri ike
na acha odo odo ha na-agbago n'eluigwe.
Ududo na eriri ya
ọdọ na-agafe. Ikpuru
ha na-ahapụ ime ụlọ ha naanị ha.
Obere nnụnụ na-agbakọta, na-agbakọta
ha na onyinye ha na oke uzo.
"Ọnọdụ onwe euthanasia" (Gloria Fuertes)
Esi m n’ụzọ pụọ
ọ bụghị ịbanye n'ụzọ,
n'ihi na ọ bụghị iti mkpu
nkọwa doro anya karị.
Anọgidere m ọtụtụ ụbọchị edeghị,
n’erughi nri ma-ebe ákwá.
"Kpee gbasara chioma" (Sor Juana)
N’ịchụ m, ụwa, kedụ ihe i nwere mmasị na ya?
Kedu ka m ga-esi mejọọ gị, mgbe m na-anwale
dobe mma na nghota m
na nghọta m adighi nma?
Anaghị m eji akụ egwu egwu ma ọ bụ akụnụba,
n’ihi ya, ọ na-eme m obi ụtọ oge niile
tinye akụ na nghọta m
Karịa nghọta m n'akụ̀.
Anaghị m eme atụmatụ mma nke gaferela
Ọ bụ nkwata obodo nke afọ
ma ọ bụ akụnụba na-atọ m ụtọ,
na-ewere ihe kachasị mma na eziokwu m
na-eri ihe efu niile nke ndụ
kari iripusi ndu n'ihe-efu.
"Lovehụnanya nke na-agbachi nkịtị" (Gabriela Mistral)
Ọ bụrụ na m kpọrọ gị asị, ịkpọasị m ga-enye gị
n'okwu, na-ada ụda ma sie ike;
ma m hụrụ gị n'anya na ịhụnanya m atụkwasịghị obi
na okwu a banyere ụmụ mmadụ, ọchịchịrị.
Ọ ga-amasị gị ka ọ ghọọ mkpu,
ma o sitere na omimi miri emi o megharia
osimiri ya nke na-agba agba, ya adaba,
tupu akpịrị, tupu akpịrị.
Abụ m otu ihe ahụ dị ka ọdọ mmiri zuru ezu
na m na ị na iyi a inert iyi.
Ihe niile maka ịgbachi m nkịtị
kedụ nke jọkarịrị njọ karịa ịbanye ọnwụ!
"Ihe na-efu efu" (Alfonsina Storni)
The caress enweghị ihe kpatara ya na-aga site na mkpịsị aka m,
ọ na - apụ na mkpịsị aka m ... Na ifufe, ka ọ na - agafe,
ihe mmetụ nke na-awagharị n'enweghị ebe ma ọ bụ ihe ọ bụla,
furu efu caress onye ga-ekuru ya?
Enwere m ike ịhụ n'anya n'abalị a na ebere na-enweghị nsọtụ,
Enwere m ike ịhụ onye mbụ batara.
Ọ dịghị onye na-abịa. Ha bụ naanị ụzọ okooko osisi.
Nke furu efu mmetuaka ga tụgharịa… mpịakọta…
Ọ bụrụ na n'anya ha susuru gị n'abalị a, onye njem,
ọ -bụru l'e-me t'ẹhu tsọo ngu ẹna;
ọ bụrụ na obere aka pịa mkpịsị aka gị
na-ewe gị na-ahapụ gị, na o nweta gị na doo.
Ọ bụrụ na ị hụghị aka ahụ, ma ọ bụ ọnụ ahụ esusu ọnụ,
ma ọ bụrụ na ọ bụ ikuku na-ekpuchi echiche efu nke isusu ọnụ,
oh, onye njem, nke anya ya di ka elu igwe,
N’ifufe a wụrụ awụ, ị ga-amata m?
"Ha na-ekwu na osisi anaghị ekwu okwu" (Rosalía de Castro)
Ha na-ekwu na osisi anaghị ekwu okwu, ma ọ bụ isi iyi, ma ọ bụ nnụnụ,
Ma ọ na-ebilite na ya asịrị, ma ọ bụ na ya na-egbuke egbuke kpakpando,
Ha na-ekwu ya, ma ọ bụghị eziokwu, n'ihi na mgbe niile m na-agafe,
Ha nātamu ntamu, si,
—Ebe nwanyị ara na-ara na-arọ nrọ
Na ndu ebighi ebi nke ndu na ubi,
N'oge na-adịghị anya, n'oge na-adịghị anya, ntutu isi ya ga-acha isi awọ,
Ọ hụrụ, na-ama jijiji, na-ajụ oyi, na ntu oyi na-ekpuchi ala ahịhịa.
"Isi-awọ di n'isim, ntu oyi di n'ọhia,
Ma m na-arọ nrọ, ogbenye, enweghị ọgwụgwọ onye na-ehi ụra,
Na mmiri ebighi ebi nke ndụ nke na-agwụ
Na ịdị ọhụrụ nke ubi na mkpụrụ obi,
Ọ bụ ezie na ụfọdụ akpọnwụwo na ọ bụ ezie na a na-akpọ ndị ọzọ ọkụ.
Kpakpando na isi iyi na ifuru, atụla ntamu banyere nrọ m,
Na-enweghị ha, otu esi enwe mmasị n'ebe ị nọ ma ọ bụ otu esi ebi ndụ na enweghị ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » +7 poems ndị ụmụ nwanyị dere
Ezigbo nhọrọ nke ndị edemede na uri. Ọ bụ ịgagharị site n'oge a na-akọ akụkọ site na nwanyị na eziokwu, na-adịkarị ike, gosipụtara dịka usoro nke oge ọ bụla. Ekele m.
Zaghachi Ana María Serra
Antonio Cabanas. "Onye edemede bụ nsonazụ nke akwụkwọ niile ọ gụrụ"
Ọrịa cancer meriri agha megide Carlos Ruiz Zafón, mana okwu ya ga-aga n'ihu na-enwu